Vaovao - Ahoana no famolavolana ireo jiro mahazatra?
Ny jiro haingon-trano dia manana fahalalahana lehibe amin'ny famolavolana. Tsy toy ny jiro ara-barotra, izay manana ny fikafika farany ny kalitaon'ny optika, ny famolavolana jiro haingon-trano dia manasongadina tsy ny hatsaran-tarehin'ny jiro ihany, fa koa ny haben'ny vokatr'ilay hazavana. Amin'ny sehatra fampiharana samihafa, matetika ny mpamorona dia manome lanja ny endrika na ny optika amin'ny jiro haingon-trano. Noho izany, rehefa manamboatra jiro haingon-trano dia tsy maintsy takatry ny mpamorona ny tahan'ny "endrika" sy "hazavana".
1.Theshape no endrika lehibe indrindra, ny jiro no mpanampy
Ny jiro rindrina eo amin'ny sary etsy ambony dia manana fiteny famoronana manankarena amin'ny endriny. Ny endrika fitaratra malama mifangaro dia manafina ny loharano mazava. Napetraka eo amin'ny rindrina ny jiro. Tsy jiro rindrina fotsiny izy io fa endrika kanto geometrika.
2.Ny hazavana no anton-javatra lehibe, ny endrika fanampiny.
Ny vongan-drano dia hianjera amin'ny vondrona chandelier-Momento. Ny aingam-panahin'i Momento dia avy amin'ny seho natiora: mitete miadana tsikelikely ny vongan-drano mandra-pahatongan'ny mitete azy ireo, toy ny hoe nifoka tamin'ny hazavana rehetra izy ireo, taratry ny manodidina azy. Ny fitoeran-jiro fitaratra an'i Momento dia rano mitete iray saika mitete. Misy loharano maivana mihantona eo amboniny. Rehefa mamakivaky ilay "rano mitete" ny hazavana, dia miverina tsy miova ny hazavana ary miparitaka, mamorona hazavana sy haavo maizina amin'ny tany, toy ny rano mitete amin'ny rano milamina ihany. Ny riaka eo amboniny dia feno fahafinaretana.
3.Form sy hazavana mifanila.
Araka ny efa nolazainay tany am-piandohana, ny fahalalahana amin'ny famolavolana jiro haingon-trano dia tsara. Ankoatry ny fifantohana amin'ny lafiny iray amin'ny endrika sy hazavana, ny mpamorona dia afaka mandanjalanja, mifangaro ary mifameno amin'ny firindrana.
Amin'ity sary etsy ambony ity, ny mpamorona dia tsy namorona endrika mirehitra, fa nampiasa peratra vy boribory manify mba hitazomana fitoeran-jiro baolina manjavozavo mitovy fanamiana. Amin'ity asa kanto ity, ny jiro volom-bolo manjavozavo mitovy fanamiana no tena vatan'ny endrika, ny vatan'ny hazavana, ary ny endrika sy ny hazavana dia mitambatra.